PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-30 - UZISHAYA ISIFUBA NGOKUFUNDISA ABEFUNDISI NGOMDALI
UZISHAYA ISIFUBA NGOKUFUNDISA ABEFUNDISI NGOMDALI
Ilanga langeSonto - 2018-09-30 - Izindaba - TSEPO MOLEFE
Usolwazi,oyisayoni, ophethe esinye sezikhungo eziqeqesha abefundisi Kwazulu-natal, uzishaya isifuba ngokulekelela abanye abefundisi basezayoni ngokubafundisa ukuphatha amabandla nokuhlonipha unkulunkulu.
Uthi ibandla lasezayoni belidume ngokushaya izigubhu, kwenziwe amaladi kodwa abefundisi bakhona bengenalo ulwazi lokuthi ibandla lilawulwa kanjani kuze kufike ekulikhuliseni.
U-archbishop Sol Roger Sibiya, ongumengameli welight of the World Bible College, emgungundlovu, futhi ongumsunguli weswelihle Ministers Association, ubonga ukukhuthala kwabefundisi basezayoni abaphuma ezandleni zakhe emuva kokunanela ikhwelo lakhe, elibamemela ezifundweni zokukhula ekuholeni amabandla nasekuqondeni ibhayibheli.
U-archbishop Sibiya, obuye ahole ibandla lakhe elaziwa emgungundlovu ngenew Christ Spiritual Church of God, okuyibandla elibuye libizwe ngenkanyezi Yokusa, uthi ukuthuthukisa abefundisi basezayoni kwaqalwa ngokuhlanganyela kwabanye abefundisi abahlanu abafika kuyena babonisana ngezindlela zokuthu- thukisa leli bandla.
Uthe lokhu kuhlangana kwakhe nalaba befundisi kwathela izithelo ezinhle ngoba kwasunguleka iswelihle Ministers Association.
“Ngo-1995 sasixoxa nalaba befundisi sabona kuyisu elihle ukuba sithuthukisane singabefundisi, singajabuleli ukuvula izinkonzo sishumayele, kodwa sibe singakwazi ukuthuthukisa amabandla esiwaholayo.
“Negama laqhamuka kanjaloke ngoba sibona ukuthi kube yisu elihle ukuhlangana kwethu saze sakha nenhlangano ezobuye ilekelele ekucathuliseni abefundisi basezayoni,” ubeke kanje.
Eqhubeka usol Archbishop, uthe ukuthela izithelo ezinhle kweswelihle kwamenza wajula naye ngolwazi lwezenkolo njengoba kwase kuqina ukusungulwa kwekolishi lebhayibheli, ilight of the World.
“Kwathi ngo-1999 kwasunguleka ilight of the World Bible College eyagunyazwa yivision International University yaseAustralia ngoba ngase ngizame kuwona wonke amanyuvesi alapha eningizimu Afrika ukuba ngibambisane nawo kodwa ngahluleka. Ngaleli kolishi sasifuna bonke abefundisi abangamalungu aseswelihle bakhule kwezenkolo,” usho kanje.
USOLWAZI Archbishop Roger Sibiya (okwesobunxele) ebusisa u-archbishop Bongani Hlongwane emuva kokumnikeza isitifiketi sokuba yilungu eligcwele leswelihle Ministers Association.